Vaovao - Hatraiza ny maha azo antoka ny volon'ny mpamono afo?
Ny mpamono afo dia mampiasa sifotra mamorona sarimihetsika (AFFF) aqueous mba hanampiana amin'ny famonoana ny afo sarotra iadiana, indrindra ny afo misy solika na ranon-javatra mirehitra hafa ‚fantatra amin'ny fahamaizan'i Class B. Na izany aza, tsy ny volon'afo avokoa no sokajiana ho AFFF.
Ny famolavolana AFFF sasany dia misy kilasy simika fantatra amin'ny hoe perfluorochemicals (PFCs) ary izany dia nampipoitra ahiahy momba ny mety hisian'ny fandotoana ny rano anaty loharano azo avy amin'ny fampiasana ireo masoivohon'ny AFFF izay misy PFC.
Tamin'ny Mey 2000, ny Orinasa 3M nilaza fa tsy hamokatra intsony ny flurosurfactants mifototra amin'ny PFOS (perfluorooctanesulphonate) amin'ny alàlan'ny fizotran'ny flouorination electrochemical. Talohan'io, ny PFC mahazatra indrindra ampiasaina amin'ny famonoana afo dia ny PFOS sy ny derivatives avy aminy.
Ny AFFF dia mamono haingana ny fandrehitra solika, saingy misy PFAS, izay midika ho akora per- sy polyfluoroalkyl. Ny fandotoana PFAS sasany dia avy amin'ny fampiasana volon'afo. (Sary / Base Joint San Antonio)
Mihevitra ny 'ara-dalàna vaovao' ho an'ny fitaovana fandoroana afo
Fandefasana zava-mahadomelina 'foam foam' akaikin'ny Detroit dia PFAS - fa avy taiza?
Ny sombin-afo ampiasaina amin'ny fiofanana ao Conn. Dia mety hiteraka fahasalamana lehibe, loza amin'ny tontolo iainana
Nandritra izay taona vitsy lasa izay, ny indostrian'ny sambo mpamono afo dia nifindra niala tamin'ny PFOS sy ny vokariny vokatry ny tsindry mpanao lalàna. Ireo mpamokatra ireo dia namolavola sy nitondra am-bolo volo afo izay tsy mampiasa fluorochemicals, izany hoe tsy misy fluorine.
Ireo mpanamboatra sombin-tsiranoka tsy misy fluor dia milaza fa tsy dia misy akony firy amin'ny tontolo iainana ireny busa ireny ary mahafeno fankatoavana iraisam-pirenena momba ny fepetra takian'ny mpamono afo sy ny andrasan'ny mpampiasa farany. Na eo aza izany dia mbola misy ihany ny ahiahy momba ny tontolo iainana momba ny afo amin'ny afo sy ny fikarohana momba io lohahevitra io.
MOMBA NY FAMPIASAANA NY AFFF?
Ny ahiahy dia manodidina ny fiantraikany ratsy eo amin'ny tontolo iainana avy amin'ny famoahana ny vahaolana sola (ny fitambaran'ny rano sy ny fifantohana amin'ny foam). Ny olana voalohany dia ny poizina, ny fahaizan'ny biodegrad, ny fikirizany, ny fikarakarana ny zavamaniry fanodinana rano maloto ary ny famoahana otrikaina amin'ny tany. Ireo rehetra ireo dia miteraka fanahiana rehefa tonga ny vahaolana amin'ny foam rafitra rano voajanahary na an-trano.
Rehefa ny AFFC misy PFC dia ampiasaina imbetsaka amin'ny toerana iray mandritra ny fotoana maharitra, ny PFC dia afaka mifindra avy amin'ny sombina mankany amin'ny tany ary avy eo mankany anaty rano ambanin'ny tany. Ny habetsaky ny PFC miditra amin'ny rano ambanin'ny tany dia miankina amin'ny karazany sy ny habetsaky ny AFFF nampiasaina, izay nampiasana azy, ny karazan-tany sy ireo antony hafa.
Raha misy lavadrano tsy miankina na any amin'ny daholobe eo akaiky eo, dia mety ho voan'ny PFC avy amin'ny toerana nampiasana ny AFFF izy ireo. Ity misy fijerena izay navoakan'ny Departemantan'ny Fahasalamana Minnesota; iray amin'ny fanjakana maromaro izy io fitsapana ny fahalotoana.
"Tamin'ny taona 2008-2011, ny maso misahana ny fifehezana ny fandotoan-tany (Minnesota Pollution Control Agency (MPCA)) dia nanandrana ny tany, ny rano amboniny, ny rano ambanin'ny tany, ary ny antsanga any amin'ireo tranokala AFFF 13 manodidina ny fanjakana. Nahita PFC avo lenta tamin'ny sasany tamin'ireo tranokala izy ireo, fa amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy nisy fiantraikany tamin'ny faritra midadasika ilay fandotoana na mety hitera-doza ho an'ny olombelona na ny tontolo iainana. Toerana telo - Duluth Air National Guard Base, Bemidji Airport, ary Western Area Fire Training Academy - no fantatra fa niparitaka lavitra ny PFC ka nanapa-kevitra ny Sampana Fahasalamana any Minnesota sy ny MPCA fa hitsapa lavadrano manodidina.
“Mety hitranga izany eo akaikin'ny toerana izay nampiasana ny AFFF misy PFC matetika, toy ny faritra fanofanana afo, seranam-piaramanidina, refinera ary zavamaniry simika. Tsy dia mitranga loatra amin'ny fampiasana indray mandeha ny AFFF hiadiana amin'ny afo, raha tsy hoe AFFF no ampiasaina. Na dia mety mampiasa AFFF misy PFC aza ny fitaovana famonoana afo sasany, dia mety tsy hampidi-doza ny rano anaty izany ny fampiasana indray mandeha monja. ”
Ny famoahana ny vahaolana amin'ny foam / rano dia mety ho vokatry ny iray na maromaro amin'ireto scenario manaraka ireto:
Fandefasana afo na fandoroana lamba firakotra;
Fanatanjahan-tena fampiofanana izay ampiasaina amin'ny foam ny sary;
Rafitra fanamoriana fitaovana sy fitsapana fiara; na
Famoahana ny rafitra raikitra.
Ireo toerana izay mety hitranga ny iray na maromaro amin'ireo hetsika ireo dia misy ny tranom-piaramanidina sy ny toeram-piofanana mpamono afo. Ny toerana manokana mampidi-doza, toy ny trano fanatobiana entana mora mirehitra / mampidi-doza, toerana fitehirizana rano be mora mirehitra ary toerana fitahirizana fako mampidi-doza, dia manao izany lisitra izany ihany koa.
Tena irina ny manangona vahaolana amin'ny foam rehefa ampiasaina amin'ny asa famonoana afo. Ankoatry ny singa misy azy, ny foam dia azo inoana fa voaloton'ny solika na solika tafiditra ao anaty afo. Hetsika ara-pitaovana mampidi-doza matetika no tapaka.
Ny paikadim-pitantanana tanana ampiasaina amin'ny fandrobana misy ranon-javatra mampidi-doza dia tokony hampiasaina rehefa misy ny fahazoan-dàlana sy alàlan'ny mpiasa. Anisan'izany ny fanakanana ny tatatra amin'ny tafio-drivotra hisorohana ny vahaolana maloto / rano maloto tsy hiditra ao amin'ny rafitry ny rano maloto na ny tontolo iainana tsy voamarina.
Tetika fiarovana toy ny famonoana rano, diking ary fanodinkodinana dia tokony hampiasaina mba hamoahana ny vahaolana amin'ny rano / rano amin'ny faritra mety hamehezana mandra-pahatongan'ny mpanao fifanekena fanadiovana fitaovana mampidi-doza.
Fiofanana miaraka amin'ny FOAM
Misy foam-panofanana noforonina manokana azo alaina avy amin'ny ankamaroan'ny mpanamboatra sombin-javatra izay manahaka ny AFFF mandritra ny fiofanana mivantana, saingy tsy misy fako lafarina toy ny PFC. Ireo foza fanofanana ireo dia biodegradable ary misy fiatraikany kely amin'ny tontolo iainana; azo alefa soa aman-tsara any amin'ny tobin'ny fitsaboana rano maloto eto an-toerana ihany koa izy ireo mba hikarakarana.
Ny tsy fisian'ny flourosurfactants amin'ny foam-piofanana dia midika fa mihena ny fanoherana ny lamosina. Ohatra, ny foam-piofanana dia hanome sakana etona voalohany amin'ny afo mirehitra mirehitra ka hiteraka famonoana, fa io lamba firakotra io dia ho potika haingana.
Izany dia zavatra tsara raha ny fahitan'ny mpampianatra azy satria midika izany fa afaka manao scenario fanofanana bebe kokoa ianao satria ianao sy ny mpianatrao dia tsy miandry ny simulator fiofanana ho lasa may vonona indray.
Ny fanazaran-tena fampiofanana, indrindra ireo izay mampiasa foam-bolo tena vita, dia tokony ahitana vatsy ho an'ny fanangonana foam-boany. Farafaharatsiny farafahakeliny, ny toeram-piofanana momba ny afo dia tokony hanana fahaizana manangona ny vahaolana amin'ny foam ampiasaina amin'ny sehatry ny fiofanana amin'ny famoahana any amin'ny toeram-pitsaboana rano maloto.
Alohan'ny famoahana azy dia tokony ampandrenesina ny toeram-pitsaboana rano maloto ary omena alalana amin'ny sampana mpamono afo mba hamotsorana ny mpiasa araka ny sanda voatondro.
Azo antoka fa ny fivoaran'ny rafitra fampidirana ho an'ny volavolan-tsokajy A (ary angamba ny simia simenitra) dia hitohy mandroso toy ny tamin'ny folo taona lasa. Fa raha ny momba ny sombin-tsolika ao amin'ny Class B, ny ezaky ny fampandrosoana ny simia dia toa nanjary nivaingana niaraka tamin'ny fianteherana tamin'ny teknolojia fototra efa misy.
Hatramin'ny nampidirana ny lalàna mifehy ny tontolo iainana nandritra ny folo taona lasa na ny AFFF miorina amin'ny fluorine dia efa nanaja ny fanambin'ny fampandrosoana ireo mpamokatra afo. Ny sasany amin'ireto vokatra tsy misy fluorine ireto dia taranaka voalohany ary ny sasany kosa taranaka faharoa na fahatelo.
Izy ireo dia hanohy hivoatra amin'ny fizotran'ny simia sy ny famonoana afo miaraka amin'ny tanjon'ny fanatontosana avo lenta ny ranon-javatra mora mirehitra sy mora may, nanatsara ny fanoherana ny fiarovana ny mpamono afo ary manome mandritra ny taona maro ny fiainana talantalana noho ny sombin-tsakafo avy amin'ny proteinina.